China XY-3540 Metal olungaphambili lwesonto ambozwe Ukwakha futhi Factory | IShuolong
I-XY-3540- Insimbi yocingo lwensimbi njengokuthuka ingasetshenziswa njengokuphepha kwangaphakathi nangaphandle, noma ngabe iyiphi insimbi engasetshenziswa ezintendeni zezitebhisi zasendlini nangaphandle, ezingangeza ukuhlobisa esikhaleni ngaphandle kokulahlekelwa ngumsebenzi wazo. Iphesenti eliphezulu lendawo evulekile yemeshini yensimbi igcina umqondo ovulekile wesikhala esigcwele ukukhanya.
Iphimbo le-Warp: 100mm
Weft Ububanzi: 4mm
Ukuphakama Kwe-Weft: 13.5mm
Isisindo: 8.65kg / ㎡
Indawo evulekile: 66.8%
Ubukhulu beMesh: 8.9mm
Ubude obukhulu: 36m
I-mesh yensimbi ingasetshenziswa njengokwahlukaniswa kwesikrini, izindonga zamakhethini, njll ekwakhiweni kwangaphakathi noma ngaphandle. I-mesh yensimbi isetshenziswa njenge-guardrail, engeza ukukhetha ekwakhiweni kokuvikelwa kwezitebhisi zangaphakathi nangaphandle. Ukusebenzisa i-mesh yensimbi njengokuvikela i-guardrail kungadlala indima yokuhlobisa ngaphandle kokulahlekelwa umsebenzi wokuvikela. SHUOLONG anezikhala zensimbi anganikeza umklamo ofanele kakhulu wephrojekthi yakho.
Ngaphezu kwalokho, uma udinga ukwengeza izinto zokwakha i-mesh yensimbi kumaphrojekthi akho aqhubekayo noma azayo, sicela uxhumane nathi ngqo. Ngaphezu kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezintengo ezihamba phambili, singanikeza futhi
Isipiliyoni Seminyaka engu-1.40: Isipiliyoni sokukhiqiza esinocingo seminyaka engaphezu kwengu-40.
Isiqinisekiso se-2.Quality: I-oda ngalinye lihlolwe futhi lilawulwe ngokuqinile ngokuya ngezinga eliphakeme kunezinga lomhlaba jikelele.
3.Ukufakwa & Izesekeli: Singahlinzeka ngezixazululo zezingcingo zocingo nezesekeli zakho
Esedlule: I-XY-3821 Metal Weave Mesh Yokuvikelwa Kokuphepha
Olandelayo: XY-3150 okuhlobisa Steel Mesh Panel for yokudlela design elingaphakathi
Izakhiwo Zensimbi Mesh
Metal Mesh Indwangu
Isikrini se-XY-M3631 Paint Copper Metal
XY-A1615 Metal Indwangu ukwahlukanisa
XY-R-2042R yethusi Mesh Ngaphakathi Glass
XY-1593 Uhafu Nxazonke Nokwelukiweyo Wire Mesh
I-XY-M4528 Architectural Mesh yeKhareteni Wall
XY-R-11SS Engagqwali Okuhlobisa Mesh